श्रीमानका यस्ता सानातिना गल्तीहरूले पनि यसरी बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू समयमै सचेत रहनुहोस् – ताजा समाचार
श्रीमानका यस्ता सानातिना गल्तीहरूले पनि यसरी बिग्रन सक्छन् श्रीमतीहरू समयमै सचेत रहनुहोस्
यस्ता समाचार हरु प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ? एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् । तर दिनहुँजसो आइरहेका समाचारहरु हेर्दा गलत बाटो अपनाउने श्रीमतिका श्रीमान कि त वैदेशिक रोजगारीमा हुन्छन् या त उनीभन्दा टाढा रहेको पाइन्छ । त्यस्तै आफ्नो श्रीमतिलाई सहीबाटोमा लगाउन बेलैमा सचेत हुनैपर्छ । त्यसका लागि यी उपाय अपानाउँदा राम्रो हुन्छ ।
घरमा पैसाको कारोबार कसले गर्छ ? श्रीमती या बाबा आमाले ? या जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन ? यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । श्रीमती हो अर्काको घरबाट मलाई नै भनेर आई, यसको अब म बाहेक अरु कोही छैन भनेर कहिल्य भावनामा नबग्नुहोस् । बरु तपाई एकपटक आफ्नो दुःखको कमाइलाई सोच्नुहोस् । मैले कमाएको पैसा यसै उडेको त छैन कतै ? त्यसैले श्रीमतिलाई अभावमा बाँच्न सिकाउनुहोस् । अभाव भन्दैमा सारो कष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतिलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने सोच्नुहोस् तपाईको लगानी बालुवामा पानी अवश्य हुन्छ ।
यो सबैमा महिलामा लागू नहुने भए पनि पछिल्लो केही यस्तो घटना घटेका छन् । जुन तपाई हामीले सामाचारमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौं । त्यसैले आफू सचेत भइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि तपाईले आफ्नो घर परिवार सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मात्र होइनन् संगै बस्दा बस्दै घरबार बिग्रिएका घटनाहरु पनि हामीले देखेका छौ तर तुलनात्मक रुपमा यस्ता घटना भने कमी नै हुन्छन। एजेन्सी